UMfundisi Timothy Omotoso icala lakhe elihlehliselwe uDisemba 10
ZANELE MTHETHWA | October 30, 2018
LIHLEHLISELWE uDisemba 10 icala likamfundisi waseNigeria obhekene namacala okudlwengula nokushushumbiswa kwabantu.
Namhlanje iJaji uMandela Makaula ukhiphe isinqumo eNkantolo eNkulu ePort Elizabeth mayelana nesicelo sikaMfundisi Tim Omotoso weJesus Dominion International sokuthi ahoxe ekwengameleni leli cala.
Ummeli ka-Omotoso, u-Advocate Peter Dauberman ufake isicelo sokuthi uMakaula ahoxe ekwengameleni ukuqulwa kwaleli cala ngoba uchemile. Ufuna icala lidluliselwe eNkantolo ePhakeme yokuDlulisa amacala.
Abammeli baka-Omotoso basola ukuthi uMakaula ucheme nofakazi wokuqala uNksz Cheryl Zondi, abathi wakhombisa nangokuthi amfisele ukubhala okuhle ukuthi uchemile. UMakaula usichithile lesi celo sokuhoxa kwakhe.
Uthe abukho ubufakazi obuqinile obethulwe abammeli baka-Omotoso obuveza ukuthi uchemile kuleli cala. Ekhipha isinqumo uMakaula ugcizelele ukuthi ukufaka lesi sicelo kubambezela icala. Uthe ukuqulwa kwecala akuwona nje umdlalo kodwa kumele kukhonjiswe ubulungiswa.
FUNDA: #OmotosoTrial: ‘Awavalwe amabandla abokufika’ - umkhankaso
NgoLwesine olwedlule u-Advocate Terry Price waletha izethulo zokuthi kungani befuna ahoxe u-Omotoso. Ukhale ngokuthi uMakaula usevele umthwese umnqamulezo u-Omotoso kuleli cala, okuzokwenza ukuthi bungabe busenzeka ubulungiswa. UDauberman ucele inkantolo ukuthi ilihlehlise icala ukuze afake isicelo eNkantolo yokuDlulisa amacala.
Abebandla lika-Omotoso bebesaqhubeka nokubhikisha ngaphandle kwenkantolo. Bebekhona nabaphikisana no-Omotoso okubalwa ithimba elizibiza ngeCitizens In Unity elihlanganise amaqembu izinhlaka zomphakathi ezahlukene okubalwa i-ANC Youth League neWomen’s League.
Emasontweni amabili edlule iCitizens In Unity yavala isonto lika-Omotoso ePort Elizabeth okuvele ukuthi isakhiwo salo sasingagunyaziwe ukuthi kusontwe khona. Ababhikishi bathe bazokwenza isiqiniseko sokuthi noma yikupho lapho kuzovulwa khona isonto lika-Omotoso bazolivala. U-Omotoso uboshwe noNksz Lusanda Solani noNksz Zukiswa Sitho abasolwa ngokulekelelana naye ekushushumbiseni amantombazane esontweni lakhe.